'संविधान संशोधनबारे दिल्लीमा छलफल भएन' - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
'संविधान संशोधनबारे दिल्लीमा छलफल भएन'
भ्रमणपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन्– भारतले नयाँ सरकारलाई उच्च महत्व दिएको छ
प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतका रुपमा भ्रमण गरेर फर्केपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारतसँगको सम्बन्ध सुधार हुनेमा ढुक्क छन्। आफ्नो भ्रमणको परिणाम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा देखिने दाबी निधिको छ। भारत भ्रमणकै विषयमा उपप्रधानमन्त्री निधिसँगको कुराकानी
विशेषदूतका रुपमा भएको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो?
भारतले मेरो भ्रमणलाई उच्च महत्व दियो। भारतीय सरकार प्रमुख र त्यहाँका महत्वपूर्ण मन्त्रीहरुसँग बडो सौहार्दपूर्ण र सम्मानपूर्वक कुराकानी भयो। नेपाल–भारत सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरुमा छलफल भयो। म यत्ति भन्न चाहन्छु, सम्बन्ध नयाँ उच्चाइमा पुग्ने गरी दिल्लीमा छलफल भएको छ।
त्यस्तो के कारण थियो जसले तपाईं विशेषदूत बनेर भारत नै जानु पर्ने अवस्था आयो?
नेपाल र भारतबीचमा केही समय सम्बन्धमा गडबड भएको थियो। त्यसलाई सुधार गर्ने उदेश्यले विशेषदूतको रुपमा मलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत पठाउनु भएको हो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु र राजनीतिक स्थिरताको वातवरण बनाएर देशको विकास गर्नु हामी सहभागी सरकारका उदेश्य हुन्। मेरो भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यान्तै राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु। यसको पुष्टि सम्माननीय प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला हुने छ।
भनेपछि तपाई भारतलाई फकाउन सफल हुनु भयो?
म जुन उदेश्य लिएर भारत गएको थिएँ,त्यसरी हेर्दा भ्रमण अत्यन्त सफल भएको छ। म अत्यन्तै खुशी छु। यस्तो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा प्रभाव पार्ने हो। त्यसको नतिजा विस्तारै देखिनेछ।
दिल्लीमा नेपालको तर्फबाट खास के कुरा गर्नुभयो?
कुराकानी त धेरै विषयमा भयो। खासगरी नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न ७ माघ, २०७४ भित्रमा नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउने काम भयो।
दोस्रो कुरा, नेपाल र भारतका उच्च पदाधिकारीहरुको दुवै देशमा भ्रमण गराउने बारेमा छलफल भयो। भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा सुनिश्चित भएको छ। त्यसैगरी नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण पनि यथाशिघ्र हुने भएको छ। अनि नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि भारत भ्रमण हुने निश्चित भएको छ। नयाँ सरकारको विशेषदूतको रुपमा मलाई अत्यान्तै उच्च महत्व दिएकोमा भारत सरकारका पदाधिकारी र विपक्षी दलका नेताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नयाँ सरकारप्रति भारतीय धारणा कस्तो पाउनुभयो?
एकदमै राम्रो । मलाई विशेषदूतको रुपमा जसरी महत्व र सम्मान दिइयो त्यो भनेको नेपाल सरकारलाई दिइएको उच्च महत्व हो। प्रधानमन्त्रीको विशेषदूतको रुपमा गएकोले नै मलाई यो सम्मान मिलेको हो।
दिल्लीमा रहँदा को को सँग भेटघाट गर्नुभयो?
मेरो विशेषगरी सम्माननीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटघाट भयो।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस आईका नेता मनोमोहन सिंह र नेता राहुल गान्धी, विजेपी अध्यक्ष अमित शाह र नेता राम माधवसँग पनि भेटघाट भयो।
अझ नेपालको आन्दोलनमा सोलिडियारिटी ग्रुप बनाएर सहयोग गर्दै आउनु भएका नेताहरु सीताराम याचुरी, केसी त्यागी, शरद यादव, सुरेन्द्र भदौरियालगायतका नेताहरुसँग भेटघाट भयो।
उहाँहरुमध्ये धेरैले ०४६ सालदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन ०६३ सम्म हामीलाई सोलिडारिटी ग्रुप बनाएर सहयोग गर्दै आउनु भएको छ।
भारतको सत्ता पक्ष, विपक्ष, नागरिक समाज र पत्रकारहरुसँग मेरो भेटघाट भयो। उहाँहरु सबैले नेपाललाई अत्यान्तै महत्व दिएको मैले पाएँ। यसलाई हामीले हाम्रो राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा प्रयोग गर्नसक्नुपर्छ।
उच्च महत्व र सम्मान दिएको अर्थ नेपालको संविधान कार्यन्वयन गर्न, मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्न र नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिरता दिन भारतले तँपाईलाई केही सूत्र दिएर पठाएको छ। के हुन् ती सूत्र?
तपाईले उठाउनु भएका विषयहरु हाम्रा आफ्ना आन्तरिक मामिला हुन्। नयाँ सरकार बन्ने बेलामा दुईवटा सम्झौता भएर बनेको कुरा सबैलाई जानकारी छ। काँग्रेस र माओवादीका बीचमा ७ बुँदे र मधेसी मोर्चासँग ३ बुँदे सम्झौता भएका छन्। अहिलेको सरकारको जग पनि यही सम्झौतामा भएको हो। त्यसैगरी, अहिलेको सरकारका प्राथमिकता पनि यही ७ बुँदे र ३ बुँदेले निर्धारण गरेको छ। यी सबै हाम्रा आन्तरिक मामिला हुन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।
भारत सरकारसँग आगामी दिनमा हुन गइरहेका प्रोजेक्टका बारेमा पनि छलफल भयो। उहाँहरु त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।
संविधान संसोधनजस्तो नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतमा छलफल गरेको भन्ने विषयमा तँपाईको धारणा के हो?
भारतसँग संविधान संसोधनका बारेमा छलफल भएको छैन। छिमेकीको नाताले नेपालका प्राथमिकताको बारेमा जानकारी मात्र गराएको हो। हामीलाई संविधान कार्यन्वयन गर्न छिमेकीहरुको सद्भाव चाहिन्छ।
फेरि,छिमेकीहरुले नयाँ सरकारका प्राथमिकताका बारेमा जान्न चाहन्छन्, यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि हो। विदेश मामिलासम्बन्धी पत्रकारिता गर्नुहुने साथीहरुले यो कुरा बुझिराख्नु जरुरी छ।
काठमाडौंबाट मध्य मधेस-तराई जोड्ने फाष्ट ट्रयाकका बारेमा पनि तँपाईले दिल्लीमा छलफल गर्नु भएको समाचार आइरहेका छन नि?
यो सरासर गलत कुरा हो। यसमा मैले धेरै टिप्पणी गर्नु छैन।
प्रकाशित ७ भदौ २०७३, मंगलबार | 2016-08-23 16:44:22